YouTube mandefa Super Chats ho fanehoankevitra raikitra ao an-tampony | Vaovao momba ny gadget
YouTube mandefa Super Chats hametraka fanehoan-kevitra voaloa amin'ny ony mivantana
Ireo youtubers mila fomba hahazoana fidiram-bola izy ireo Ary ny YouTube, Twitch ary ny hafa izay manandrana mamorona fomba hisintonana ny sain'ny mpampiasa mijery ireo fantsona mba hahazoan'izy ireo fisehoan-kintana sasany. Amin'izany fomba izany ny asan'ny youtuber dia azo valisoa amin'ny fomba tsotra nefa tsy mila manao "stunts" marobe amin'izany.
YouTube dia nanolotra a fitaovana vaovao antsoina hoe Super Chat izay mamela ny mpijery mandoa vola handefasana hevitra mandritra ny stream mivantana. Ny Super Chat amin'ny ankapobeny dia hafatra malaza iray ao amin'ny stream chat izay mijanona ho hitan'ny vahoaka ary manampy ny mpamorona hisarika ny saina.
Afaka manao ireo Super Chats ireo mijanona eo an-tampon'ny chat hatramin'ny 5 ora farafahakeliny, izay manome fotoana bebe kokoa hanehoana ireo hafatrao.
Mba hahafahana manampy Super Chat, ny mpampiasa dia tsy maintsy manindry ny takelaka dolara ao amin'ny interface chat na amin'ny app Android ary amin'izany dia mandoa vola mba hanasongadinana tsara ny hevitr'izy ireo. Izany Super Chat izany nasongadina tamin'ny loko, ary manondro ny vanim-potoana izay hijanona raikitra eo an-tampony. Ary koa, ny halavan'ny hafatra dia voafaritry ny vola aloa.
Amin'izao fotoana izao, ny Super Chats dia tsy afaka novidina tamin'ny YouTube na YouTube Gaming amin'ny Internet na amin'ny alàlan'ny Android, raha mbola tsy manohana ny iOS. Ity endri-javatra ity dia miditra anio avy amin'ny beta, miaraka amin'ny famoahana farany ny 31 Janoary ho an'ny mpamorona any amin'ny firenena 20 sy ny mpijery mihoatra ny 40.
YouTube no tadiavinao dia mamono vorona roa amin'ny tifitra iray, tazomy velona ny resaka ho an'ny mpamorona sy ny fifandraisany amin'ireo mpankafy azy manankarena sy mavitrika, ary manome azy ireo vola miditra. Amin'ny lafiny iray, tsy hoe mahazo kely izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » YouTube mandefa Super Chats hametraka fanehoan-kevitra voaloa amin'ny ony mivantana
Fantaro kely kokoa i Neon, fanamoriana fanandramana vaovao an'ny Opera
Hatreto aloha dia avo roa heny ny varotra Oculus Rift an'ny HTC Vive